Ubunzima Ngexesha Lemfazwe—Ulawulo LwamaJapan | Imbali YaseIndonesia
Ekuqaleni kuka-1942, umkhosi wamaJapan walawula ngenkohlakalo kulo lonke elaseIndonesia. Abazalwana abaninzi babesenza imisebenzi enzima njengokwakha iindlela nokucoca imijelo. Ngenxa yokungavumi kwabo ukuxhasa umkhosi, abanye baphoswa ezintolongweni baza bangcungcuthekiswa. Abathathu kubo bafela entolongweni.
UJohanna Harp, amantombazana akhe amabini, kunye nomhlobo wentsapho, uBeth Godenze (phakathi)
Kwiminyaka emibini yokuqala yemfazwe, omnye udade ongumDatshi, uJohanna Harp ohlala kwilali esentabeni ekwiMpuma yeJava, wabhungca akaya entolongweni. Yena nabantwana bakhe abathathu abakwishumi elivisayo, basebenzisa inkululeko yabo ngokuguqulela incwadi yesiNgesi ethi Salvation neeMboniselo ngesiDatshi. * Ezi ncwadi babeziguqulela zazithunyelwa ngokufihlakeleyo kumaNgqina akuyo yonke iJava.
Amanye amaNgqina akhululekileyo ayedibana njengamaqela amancinci ukuze ashumayele ngokufihlakeleyo. UJosephine Elias (owayekade enguTan) uthi: “Ndandisoloko ndikhangela amathuba okushumayela ngokungacwangciswanga. Xa ndityelela abantu abanomdla, ndandiphatha ibhodi yetshesi ukuze abanye bacinge ukuba ndiyokudlala itshesi.” UFelix Tan nomfazi wakhe, uBola, babesenza ngathi bathengisa isepha ngoxa beshumayela kwindlu ngendlu. UFelix uthi: “Ngamanye amaxesha sasiye silandelwe ziimpimpi zeKempeitai, amapolisa omkhosi wamaJapan owoyikwayo. Ukuze singaqondakali, sasiye sityelele izifundo zethu ngamaxesha ahlukahlukeneyo. Ezintandathu kuzo zabhaptizwa kanye ngexesha lemfazwe.”
Njengoko abazalwana babesele bebuqhelile ubunzima bexesha lemfazwe, bajongana nolunye uvavanyo oluqatha. Amagunya aseJapan ayalela ukuba zonke iimbacu (kuquka amaTshayina aseIndonesia) zibhalise emkhosini nokuba ziphathe isazisi esasinesifungo esithi, ndithembekile kulawulo lwamaJapan. Abazalwana abaninzi babezibuza, ‘Ngaba sifanele sibhalise size sisityobele esi sazisi, okanye simele sale?’
UJosephine Elias nomntakwabo uFelix
UFelix Tan uthi: “Abazalwana baseJakarta bacela thina sasiseSukabumi ukuba singasityobeli isazisi. Kodwa sabacela abasemagunyeni ukuba kutshintshwe amagama athi ‘lo utyobele apha ngezantsi wenze isifungo,’ kubhalwe athi, ‘lo utyobele apha ngezantsi akazukuphazamisana’ nomkhosi wamaJapan. Okumangalisayo kukuba bavuma, saza sonke sazifumana izazisi. Xa abazalwana baseJakarta beva ngesigqibo esasenzayo, bathi singabawexuki baza bayeka ukunxulumana nathi.”
Okubuhlungu kukuba abazalwana baseJakarta abangqongqo kakhulu babanjwa baza bayishiya inyaniso. Omnye umzalwana ongazange avume ukulalanisa wavalelwa kunye noAndré Elias. UAndré uthi: “Ndaqiqa naye ngombandela wezazisi ndaza ndamnceda ukuba awuqonde kakuhle. Ngokuzithoba wacela uxolo ngokuthi singabawexuki. Ngoko saba nexesha elimnandi lokukhuthazana, kodwa okulusizi kukuba wafa ngenxa yeemeko ezinzima zasentolongweni.”
Xa yaphelayo imfazwe ngo-1945, abazalwana noodade babekufuna ngamandla ukuqhubeka nomsebenzi wokushumayela. Omnye umzalwana owayebanjiwe futhi engcungcuthekiswa wabhalela isebe laseOstreliya: “Sendiphinde ndalapha emva kokunyamezela iminyaka emine yonke yaye anditshintshanga. Kuzo zonke iingxaki ebendikuzo, zange ndibalibale abazalwana bam. Ndicela nindithumelele iincwadi.”
Iincwadi ekwakudala zifunwa zafika, ekuqaleni zazimbalwa kodwa ekugqibeleni zaba ninzi. Iqela labavakalisi abalishumi baseJakarta laqalisa apho beliyeke khona ukuguqulela iincwadi ngesi-Indonesia.
NgoAgasti 17, 1945, abaphathi belinye iqela lepolitiki babhengeza iindaba zokuba i-Indonesia yiriphabliki ezimeleyo, nto leyo eyabangela udushe olwathatha iminyaka emine kuvukelwa ulawulo lwamaDatshi. Apho kwafa izihlwele zabantu, ibe abangaphezu kwezigidi ezisixhenxe baba ziimbacu.
Phezu kwayo yonke loo nto abazalwana abazange bayeke ukushumayela kwindlu ngendlu. UJosephine Elias uthi: “Abalweli benkululeko basinyanzela ukuba sikhwaze igama elithi ‘Merdeka,’ elithetha ‘Inkululeko.’ Sabaxelela ukuba asithathi cala kwimiba yeepolitiki.” Ngo-1949, emva kokuba amaDatshi elawule i-Indonesia ixesha elide, ayinikezela kwiRiphabliki yaseUnited States yaseIndonesia (ngoku eyiRiphabliki yaseIndonesia). *
Ngo-1950, abazalwana baseIndonesia banyamezela imvukelo eyathatha iminyaka ephantse ibe lishumi. Kodwa wawusemninzi umsebenzi owawubajongile. Babeza kuzishumayela njani iindaba ezilungileyo kwizigidi zabantu baseIndonesia? Kwakubonakala ngathi abanakukwazi konke konke! Sekunjalo, ngokholo baqhubeka nalo msebenzi beqinisekile ukuba uYehova wayeza ‘kukhupha abasebenzi baye esivunweni sakhe.’ (Mat. 9:38) UYehova wenza kanye loo nto.
^ isiqe. 2 Emva kwemfazwe, intombi encinci kaDade Harp, uHermine (uMimi) yaya kwisikolo saseGiliyadi yaza yabuyela eIndonesia njengomthunywa wevangeli.
^ isiqe. 3 AmaDatshi aqhubeka elawula kwiNtshona yePapua (eyayibizwa ngokuba yiWest New Guinea) de kwango-1962.
Kutheni AmaNgqina KaYehova Engabandakanyeki Kwiipolitiki?
Ngaba ukungabandakanyeki kwethu kwezopolitiko kuyingozi kurhulumente?
EIndonesia: Ulawulo Olunzima LwamaJapan